समाचार - कसरी तपाईंको आँखाको आकारको लागि सही गलत गलत eyelashes छनौट गर्ने? | कालोसिल्स ब्यूटी
कसरी आफ्नो आँखा आकार को लागी सही झूटा eyelashes छनौट गर्न?
धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै आँखाको आकार कसरी जान्ने र कसरी सहि गलत झलकहरू छनौट गर्ने बारे अलमलमा छन्। तल तपाईको संदर्भका लागि विस्तृत परिचय र सुझावहरू छन्। कालोकिल्स ब्यूटीले सँधै तपाईंलाई उत्तम झूटो कोर्रा प्रस्ताव गर्दछ।
बदाम आँखाहरू: यो आँखा आकार upswept बाहिरी कुना द्वारा विशेषता छ। यस आँखाको आकारका धेरै महिलाहरू आफ्नो आँखाको गहिराई र तीव्रता वृद्धि गर्न चाहन्छन्, त्यसैले आईलाइनरको साथ प्रयोग गरेर बोल्ड स्वीपको रूपमा माथिल्लो ढक्कन, तटस्थ र lको अस्तर, र विभिन्न रंगहरूमा माथिल्लो र तल्लो लाइनर। बदामका आँखा ठूला देखिन मद्दत गर्नको लागि लाइनरलाई शीर्ष ढक्कनको बाहिरी भागमा सीमित गर्नुहोस्। बदामका आँखालाई अधिक गोलो बनाउनको लागि आँखाको बाहिरी कुना भन्दा पहिले लाइनर रोक्नुहोस्, वा त्यस ठाउँमा हल्का छाया वा धुँवा वा धुँवादार दृश्य प्रयोग गर्नुहोस्।
कालोकिल्स3डी श्रृंखला झूटा ल्याशहरू: ELLEN शैली
आँखा बन्द सेट गर्नुहोस्: बन्द सेट आँखाहरू नाक को पुल नजिक र एक अर्कोको नजिक जाँदैछन्। तपाईंसँग नजिक सेट आँखाहरू हुन सक्छन् जुन हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका आकारहरू मध्ये कुनै हुन वा तिनीहरू नजिक सेट भएका आकारहरूको संयोजन हुन सक्छन्। नजिकको आँखा भएका मानिसहरूलाई अक्सर धूर्त र स्मार्ट र नजिक-सेट आँखाहरू एक मान्छे को रूप मा देखाइन्छ एक धेरै उल्लेखनीय सुविधा हो।
कालोसिल3डी श्रृंखला झूटा ल्याशहरू: डेमी शैली
गहिरो सेट आँखाहरू: डीप-सेट आँखाहरू ठूलो हुन र अधिक भन्दा सकेट मा गहिरो सेट। तिनीहरू यस्तो प्रकारले अवस्थित छन् कि भुँडीको हड्डी अझ प्रख्यात देखिने बनाउँदछ र प्राकृतिक फड्कोको अन्तहरू पलकको टुप्पा चरिरहेका हुन्छन्। गहिरो सेट आँखालाई तान्न आवश्यक छ त्यसैले फड्का छनौट गर्नुहोस् जुन बीचको बीचमा छ, कर्लिंग अप र बाहिर, ब्राउबाट टाढा छ। तपाईको केन्द्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न, त्यहाँ घुम्ने लिफ्टको लागि थप आवेदन दिन व्यक्तिगत आँखाहरू पनि साँच्चिकै राम्रोसँग काम गर्दछन्।
कालोसिल २mm मिमि झूटा ल्याशहरू: एवीआईवा स्टाइल
डाउनटाउन आँखा: बाहिरी कुनाहरू र बाहिरी कुनाहरू झर्छन् वा तल मोडिन्छन् जबकि आन्तरिक कुनाहरू माथि घुम्दछन्। डाउनटर्नर्ड आँखाको आकार धेरै कामुक छ र भारी र sultry देखा पर्दछ। यसलाई सुत्ने कोठाको आँखाको रूपमा पनि चिनिन्छ र यो एक अचम्मै आँखा आकार हो। Downturned आँखाहरू अक्सर ठूला हुन्छन् र आफुलाई राम्रो मेकअप अनुप्रयोगमा राम्रोसँग उधारो दिन्छन्।
कालोसिल २ 25 मिमि झूटा ल्याशहरू: हेलेना स्टाइल
हूड आँखाहरू: यदि तपाईं आँखा खोलिएको छ भने, तपाईं पलक भन्दा तल एक गुणा देख्नुहुनेछ, त्यसैले जब आँखा खुला, पलक देख्न सकिदैन र क्रीज मा retরে। यस आकारको लागि आदर्श ल्याश, गहिरो सेट आँखाहरू जस्तै, लामो हुनुपर्दछ र केन्द्रतिर बढी लम्बाइ हुनुपर्दछ। क्लस्टर ल्याशहरू वा व्यक्तिहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन् किनकि तपाईं आफैंलाई निर्माण गर्न चाहानु भएको जस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। पट्टी ल्याशमा नडराउनुहोस्, ढक्कन तल तान्न सक्ने सेट छनौट गर्न सावधान हुनुहोस्, तिनीहरूलाई सानो देखाउँदै।
कालोसिल २ 25 मिमि झूटा ल्याशहरू: एलिसन शैली
मोनो-लिड आँखाहरू: मोनो- लिड भएका आँखाहरू सतहमा सपाट र निश्चित क्रीजमा अभावको रूपमा वर्णन गरिएको छ, कहिलेकाँही ती सबैमा एक पनि हुँदैन। मोनोलिड आँखाहरूमा नेत्रहरू छन् जुन स्वाभाविक रूपमा सीधा र जिद्दी हुन्छ, त्यसैले जब यो उत्तम ल्यास टिप्ने कुरा आउँछ, उत्तम हुन्छ मल्टि-लेयर्ड, फडफड च्यार्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु किनभने यसले यस जोडीलाई सूक्ष्म तर सेक्सी ध्यान आकर्षित गर्न चमत्कार गर्दछ। सुन्दरको।
कालोसिल २ 25 मिमि झूटा ल्याशहरू: ZOEY स्टाइल
प्रमुख / अगाडि आँखा: प्राकृतिक, एक लेस से मध्यम मध्यम फड्को लम्बाई संग एक फट्या style्ग शैली मात्र सही flare प्रदान गर्दछ अझै तपाईंको आँखामा ध्यान ल्याउन। प्रख्यात वा उत्तल नेत्र आकारका लागि, मेकअपले बाहिरीपनलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ यदि बल्ज, वा बग आउट गर्दै। आँखालाई देखा पर्नको लागि कि अनुहारमा अलि अलि बगिरहेको छ, फड्किएको रेखा र ढक्कनको आधारको नजिक आँखा छायाको कालो छायाँ प्रयोग गर्नुहोस्। क्रीजको लागि हल्का हल्का छाया प्रयोग गर्नुहोस्, र बाहिर ब्राउड हड्डीतिर मिश्रण गर्नुहोस्।
कालोसिल3डी मिंक ल्याशहरू: DONNA शैली
गोल आँखाहरू: यो आँखा आकार प्राय: ठूलो हुन्छ, र खुला देखिन्छ र धेरै महिला आँखा लम्बाउन मेकअप प्रयोग गर्न को लागी। गाढा लाइनर प्रयोग गर्नुहोला पछाडि पछाडि विस्तार गर्न बाहिरी कुनामा यो भ्रम प्रदान गर्न। पलकमा आँखाको छायाको मध्यम छाया प्रयोग गर्नुहोस् (क्रीज सम्म) र छाया विस्तार गर्नुहोस् दुबै ब्राउ हड्डी र थोरै तल्लो तानको तस्बिरमा विस्तार गर्नुहोस् र अधिक लामो आँखा देखावट सिर्जना गर्न।
कालोसिल्स म्याग्नेटिक नेत्रगण: चुम्बकीय ल्याश किट
बरौनी विस्तार, बरौनी विक्रेताहरू, मिंक कोर्रा, आँखा ल्याश, आँखा लाइनर, आईलाइनर,